Menyu Z, mutsva mutsva wePlasma mune yakachena Windows 10 maitiro | Linux Vakapindwa muropa
Menyu Z, chishandiso chitsva chekushandisa Plasma mune yakachena Windows 10 maitiro
Ndichiri kurangarira makore mazhinji apfuura pandakatanga kushandisa Ubuntu, kuti chipangamazano wangu akandiudza kakawanda kuti "muLinux unogona kuchinja zvese." Uye ichokwadi. Mune zvimwe zviitiko isu tinofanirwa kutora mamwe matanho kupfuura mamwe, asi isu tinogona kuchinja zvese. Dzimwe nguva shanduko dziri nyore uye tinogona kuzviita nekupinda kuraira kana kudzvanya marongero, asi isu tinogona zvakare kuisa software yakadai se Menyu Z, yekutanga application kana pani yemakomputa uchishandisa KDE
Chinhu chekutanga chatinofanira kutaura ndechekuti isu tiri kutaura pamusoro pekutanga kana pani, kwete iyo tema yakazara sezvazvinoonekwa mune iyo skrini. Kana tangoisa iyo plasmoid, isu tinokwanisa kusarudza iyo launcher, asi haigadzirise zvimwe zvikamu zveiyo interface, senge maneja wefaira. Kana zvichizodaro bhaa repazasi tarisa seWindows 10. Uye zvakare, inowanikwa mune yakajeka uye yakasviba modhi, chimwe chinhu chisingashamisi kana tichifunga kuti rima riri mufashoni.
Maitiro ekuisa Menyu Z
Kana iwe uchida kuyedza iyo, iwe unofanirwa kuiisa nekutevera aya matanho akatsanangurwa mu KDE Chitoro:
Dhawunirodha pasuru kubva kubhatani rebhuruu kumusoro kurudyi iyo inoti "Dhawunirodha".
Kubva kuchiteshi, tinofamba tichienda munzira yatakatora pasi nekuita rairo inotevera (kuti tivandudze tichashandisa "- kusimudzira" pasina makotesheni):
plasmapkg2 --install menuZ.plasmoid
Kana tangotangazve, tinobva tadzvanya panhare.
Tinosarudza «Ratidza dzimwe nzira». Imwe sarudzo ndeye kubaya pani uye sarudza "wedzera graphic element".
Chekupedzisira, isu tinosarudza iyo nyowani «Menyu Z» inozoonekwa senge sarudzo. Ive nekuchenjerera: kana isu tikasarudza rakasiyana repazasi pani pane iyo yatiinayo, izvo zvingasarudzwa zvingangogadziriswazve kana tichida kushandisa iyo yataive nayo zvakare.
Ini pachangu, ini handisi fan mukuru weiyo Windows mufananidzo, asi ini ndine chokwadi chekuti vazhinji vanoifarira. Uye zvakare, ichi chekutanga chinogona kuita kuti zvinhu zvive nyore kune vanochinja vatamira kuLinux kubva kuMicrosoft system. Uri mumwe wavo here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Menyu Z, chishandiso chitsva chekushandisa Plasma mune yakachena Windows 10 maitiro
LibreOffice 6.4.2 inouya nezvinopfuura makumi mapfumbamwe ekugadzirisa kweshanduro yayo yakagadziridzwa
Opera GX: iyo browser yevatambi uye yavo GX Kudzora paLinux